Hovana ny fetran'ny fandotoana ny rivotra | Green Renewable
Hovana ny fetran'ny fahalotoan'ny rivotra
Portillo Alemanina | | Tontolo_iainana
La fahalotoan'ny atmosfera olana lehibe io ka tsy maintsy tsaboina ary misy ny fepetra raisina hampihenana azy. Noho ny fahalotoan'ny rivotra dia olona an'arivony maro isan-taona no maty miaraka amin'ny aretim-po sy aretin'ny taovam-pisefoana. Izany no antony Ny Parlemanta Eoropeana Hankatoavina ao anatin'ny tapa-bolana ny fanovana ny lalàna mifehy ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fampihenana ny famoahana ny firenena amin'ny loto maloto enina.
Ny fetra napetraky ny fanovana vaovao dia hihatra ho an'ny 2020 sy 2030, rehefa vita ny fifampiraharahana nataon'ny Parlemanta eropeana sy ny filankevitra eropeana izay nanomboka tamin'ny 2013.
Ny fanjakana dia manana olana amin'ny fanarahana ny torolàlana momba ny fahalotoan'ny rivotra ankehitriny. Ny MEP Julie Girling nahatsiaro fa misy Firenena 17 izay mbola tsy nahavita nampihena ny fandefasana entona amin'ny atmosfera. Mazava ho azy, ao amin'ireo firenena izay tsy mahomby dia i Espana.
Ny fanovana izay hatao amin'ny torolàlana eropeana dia mandinika fetra vaovao amin'ny fandotoana ny atmosfera, saingy tsy mianatra na manome hevitra Tsy misy na inona na inona amin'ny hetsika manokana izay tsy maintsy ataon'ny firenena mpikambana mba hahatratrarana ny fihenan'ny famoahana fandotoana mandoto. Ny fanatsarana ny tambajotram-pitateram-bahoaka ary ny fanatsarana ny famokarana orinasa mpiompy dia voalaza. Amin'izay dia hihena ny entona mandoto.
Miaraka amin'ny fanovana an'io toromarika io, ny tanjona dia ny hampihenana ny haavon'ny loto hatramin'ny 70% hatramin'ny 2030. Na dia lafo aza ny fampiharana manodidina ny 3.000 tapitrisa euro, raha ela ny ela dia ho be ny tombony satria hamokatra izany asa manodidina ny 40.000, manampy eo amin'ny 40.000 tapitrisa isan-taona.
Ny entona mandoto enina tafiditra ao amin'ilay torolàlana dia ny diôzida solifara, diôdiôida azônôma, amoniaka, fitambarana organika miovaova, ampahany tsy latsaky ny 2,5 isaky ny tapitrisa, ary metana. Tsy manangona CO2 izy io satria hita amin'ny fitsipika eropeana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Hovana ny fetran'ny fahalotoan'ny rivotra
Soofa dia manaparitaka Tondro E-ink misy herin'ny masoandro any Boston